Fanafihana amin’ny lalam-pirenena : gadra mamita sazy, nanafika taksibrosy | NewsMada
Fanafihana amin’ny lalam-pirenena : gadra mamita sazy, nanafika taksibrosy
Nitrangana fanafihana taksiborosy tany Ambohivoho, fokontany Antanety, kaominina Soavina, distrika Betafo, ny herinandro lasa teo tamin’ny 9 ora sy sasany alina. Enin-dahy ireo voasambotra tamin’izany. Gadra mamita sazy ny roalahy tamin’ireo…
Araka ny vaovao avy amin’ny zandarimaria, notafihin’ ny jiolahy teo amin’ny PK 30+800 RN 34 ny Sprinter iray ho any Morondava. Nitifitra tamin’ny basim-borona ireo jiolahy, saingy tafatsoaka ihany ilay taksiborosy ary tsy nisy naratra. Nampandre ny zandary ao Betafo ilay mpamily ary nidina avy hatrany teny an-toerana ny zandary avy ao amin’ny borigady Betafo. Nifanehitra tamin’ireo olon-dratsy ireto zandary ireto ary nitifitra avy hatrany. Ireo mpanakan-dalana kosa tsy nanana bala intsony ka nitsoaka nandositra. Raikitra ny fifanenjehana ka tratra sambo-belona ny iray tamin’ireo, izay ankizy tsy ampy taona, vao 15 taona monja. Nahita “etuis” kalibra 12 vita gasy iray ny zandary nandritra ny famotopotorana ny toerana nitrangan’ny fanafihana.
Taorian’ny famotorana nataon’ny zandary, tratra ny ampitson’io ihany ny namany dimy hafa ka ireo voalaza fa gadra ao amin’ny camp pénal Ambohivoho ny roa lahy. “Gadra tamin’ny 2016 ka mamita sazy 5 taona noho ny heloka bevava ireo”, hoy ny fanazavana. Nosamborina tao amin’io camp pénal io izy ireo. Ireo roa lahy hafa, mbola tao ihany koa no nosamborina, izay voalaza fa niafina tao niaraka tamin’ireo gadra ireo. Ny iray farany, nosamborina tany amin’ny Mahaiza, ilay tompon’ny basy vita gasy nentin’izy ireo nanafika, ary mbola nahatratrana ilay basy sy famaky, kiririoka, antsy, baramina ihany koa.
Notazomina ao amin’ny borigady Betafo izy ireo hanaovana ny famotorana.
Gadra no mivoaka manafika
Mipetraka ny fanontaniana, ny amin’ny fomba nahafahan’ireto olona mamita sazy ireto any am-ponja nefa afaka mivoaka manafika. Mety hoe, afaka mivoaka mandehadeha tsy misy fanaraha-maso ny voafonja any amin’ity toerana ity. Ny azo antoka, na hisy aza ny fandavana, misy ny firaisana tsikombakomba amin’ity raharaha ity.
Toe-javatra tahaka izao izay mahabe resaka eto amin’ny firenena, mahavoatonontonona tompon’andraikitra maro. Na resaka fakana an-keriny, voatonona hatrany ny olona efa voafonja mivoaka manao asa ratsy. Ity fanafihana fiara eny amin’ny lalam-pirenena. Mialokaloka amin’ny fanambarana sy ny fifampiarovana hatrany ireo voatonontonona…